मुम्बईको कोठीमा बेचिएकी सुनिता लेख्छिन्– ‘घाँटी रेट्नै लाग्दा पनि मैले धन्दा गरिनँ’ « Pahilo News
मुम्बईको कोठीमा बेचिएकी सुनिता लेख्छिन्– ‘घाँटी रेट्नै लाग्दा पनि मैले धन्दा गरिनँ’
प्रकाशित मिति : 15 September, 2016 12:28 pm
जब सम्पूर्ण रुपमा म होसमा आएँ, एउटा यस्तो कोठामा मैले आफूलाई पाएँ, जुन मेरा लागि बिल्कुल नौलो थियो । फलामै फलामले बारिएका झ्यालबाट बाहिर केही देखिँदैनथ्यो । उठेर दायाँ–बायाँ हेर्न थालेँ । त्यहाँ थुप्रै कोठाहरु रहेछन् । छेउका कोठाहरुमा मजस्ता केटीहरु लहरै सुतिरहेका रहेछन् । कोही अर्धनग्न अवस्थामा पल्टिएका थिए, कोही टुपीसमा लडिरहेका थिए । एउटा छेउमा केही केटीहरु छिल्लिइरहेका देखिन्थे । ओंठमा गाढा रातो लिपिस्टिक, गालामा भद्दा मेकअप अनि आँखामा लत्पतिएको गाजलमा सजिएका ती केटीहरु भर्खर सोह्र–सत्र वर्षका जस्ता देखिन्थे । उनीहरुको पोशाक र हाउभाउ अलि भिन्न थियो । यी केटीहरु यहाँ के काम गर्छन् होला भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा पलायो ।
एक ठाउँबाट अलिअलि बाहिरको परिवेश देखियो । म गाउँको माटोमै जन्मिएकी, माटोमै हुर्र्किएकी । ठूल्ठूला पक्की घर मैले जीवनमा देखेकै थिइनँ । आमा–बाबुको काख छोडेर एक दिन पनि बाहिर बसेकी थिइनँ । त्यहाँ त पक्की बिल्डिङ । सुकिलो परिवेश । चमकधमक । अहो ! म यस्तो ठाउँमा त बसेकी थिइनँ, कसरी म त्यहाँ पुगेँ ? बुबा–आमा कहाँ जानुभयो ? भनेर आत्तिएँ ।
म त्यसबेला झसङ्ग भएँ, जब मैले देखेँ मेरो भर्खर ६ महिनाको बच्चालाई केही केटीहरुले खेलाइरहेका थिए । दौडिदै गएर मैले आफ्नो छोरालाई उनीहरुको हातबाट खोसेर छातीमा टाँसे ।
‘तिमीहरुले मेरो बच्चा किन लिएको ? को हौ तिमीहरु ? मेरो बुबा–आमा खोई ?’, मैले सोधेँ ।
त्यहीबेला एकजना मोटी न मोटी महिला आइन् । उनले आएर भनिन्, ‘तिमीलाई भोक लागेको छ ?’
‘छैन, मलाई भोक लागेको छैन, बरु भन्नुस् यो कुन ठाउँ हो, मलाई यहाँ कसले, कसरी ल्याइयो ?’, मैले आँत्तिदै सोधेँ ।
‘तिमीलाई दुईजना दाइले यहाँ घुमाउन ल्याएका हुन् । उनीहरु अहिले तिम्रो लागि नयाँ–नयाँ लुगा किन्न गएका छन् । तिमी नुहाइधुवाइ गरेर चटक्क परेर बस, भरे तिमीलाई लिएर घुम्न जाने हो’, उनले भनिन् ।
एक मनले लाग्यो, ती महिलाले भनेकी कुरा सही नै हो कि ? मलाई थाहा नभएको हो कि ? राम्रै हुन गइरहेको हो कि ? के हो ?! के हो ?! मेरो दिमागले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन ।
दुई दिन भइसक्यो, ती केटाहरु आएनन् । मलाई खाना ल्याएर दिन्थे, कहाँ रुच्थ्यो
र ? दुई दिनसम्म केही पनि खाइनँ । अनि दोस्रो दिन मैले भनेँ, ‘मलाई यहाँबाट छोडिदेऊ, मेरा आमाबुबा हुनुहुन्छ, म आमाबुबाकहाँ जान्छु ।’
केही बेरपछि ती मोटी महिला आएर भनिन्, ‘अब तिमी नुहाइधुवाइ र मेकअप गरेर चिटिक्क पर । कपाल काट । तिमी यहाँबाट उम्किन पाउँदैनौ । तिमी अब राम्री हुनुपर्छ ।’
‘मैले किन राम्री हुनुप¥यो ?’, मैले सोधेँ ।
‘अब यहाँ तिमीले धन्दा गर्नुपर्छ’, मोटी महिलाले भनिन् ।
‘धन्दा’ भन्नाले मैले के ठानेँ भने घरभित्रको कुनै काम होला । मैले त धन्दा भन्नाले भाँडा माझ्ने, खाना बनाउने र लुगा धुने काम होला भन्ने ठानेकी थिएँ । मेरो दिमागमा धन्दाको अर्थ त्यो थियो ।
‘मलाई धन्दा गर्न केही आउँदैन । घरमा पनि मैले धन्दा गरिनँ । भाँडा माझ्ने, लुगा धुने र खाना बनाउने सबै धन्दा आमाले गर्नुहुन्थ्यो । मलाई त त्यो कुनै पनि धन्दा आउँदैन, बरु बाहिरको कुनै काम हो भने भन्नुस्, मलाई जुनसुकै काम गर्न आउँछ । दाउरा चिर्नेदेखि ढुंगाको गारोसम्म म लगाउनसक्छु । तर घरभित्रको धन्दा गर्न मलाई आउँदैन’, मैले भनेँ ।
‘हैन तैँले धन्दा नै गर्नुपर्छ’, ती महिलाले भनिन् ।
दोस्रो दिन साँझपख मैले सोधेँ, ‘यो कुन ठाउँ हो ?’
‘यो बम्बई हो’, उनले भनिन् ।
अनि बल्ल म छाँगाबाट खसेझैं भएँ । किनकि बम्बई भनेपछि मात्र मैले ‘धन्दा’को अर्थ बुझेँ । गाउँमा हुँदा मेरो बुबा–आमाबीच बम्बईको बारेमा कुराकानी भएको म सुन्ने गर्थेँ । ‘बम्बईमा सोझासादा केटीहरुलाई फकाएर लैजान्छन् रे, त्यहाँ उनीहरुलाई लगेर बेचिन्छ रे, केटीहरुलाई नराम्रो काममा लगाइन्छ रे’ आदि–इत्यादि चर्चा गरेको म सुन्थेँ । आफूलाई त्यसरी बम्बई पु¥याइएको चाल पाएपछि मैले आफूले टेकेको जमिन नै भासिएको जस्तो अनुभव भयो । म एकदम आत्तिएँ । मलाई बल्ल थाहा भो, ट्रयाक्टर चलाउने ती केटाहरु मानव बेचबिखन गर्ने दलाल रहेछन् । उनीहरुले बेहोस बनाउने औषधि हालिएको मिठाइ खुवाइएका रहेछन् । आमा र बुबा पनि बेहोस, म पनि बेहोस । आमा–बुबा कता हुनुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा भएन । आखिर ती केटाहरुले मलाई बम्बईको कोठीमा पु¥याएर बेचेका रहेछन् ।
‘मलाई यहाँबाट छाडिदिनुस्, म जान्छु । म यो काम गर्दिन’, मैले रुँदै हात जोडेर
मोटी न मोटी आइमाई त कोठीकी ‘बाइ’ अर्थात ‘घरवाली’ रहिछिन् । मैले जान्छु भनेर कराउन थालेपछि उनले पनि कडा स्वरमै भनिन्, ‘मैले तँलाई किनेर ल्याएको हो, पहिला त्यो पैसा तिर अनि जा । हैन भने यो काम के तेरी आमाले आएर गर्छ ?’
जब त्यो ‘घरवाली’ले ‘आमा’ शब्द उच्चारण गरिन्, मलाई सहन झन् गाह्रो भयो । मैले आँखा बन्द गरेर आक्रोशको आवेगलाई रोक्ने कोसिस गरेँ, तर सकिनँ । रिसमा आँखा पनि मैले देखिनँ । के के गरेँ, गरेँ ? मेरो त्यस्तो व्यवहार थेग्न नसकेर उनीहरुले हतार–हतार मलाई ढोकाभित्र छिराए र चाबी लगाए ।
जाने बेलामा ‘घरवाली’ले भनी ‘जबसम्म तैँले धन्दा गर्दिनस्, तबसम्म तँैले पानी पनि पाउँदिनस् ।’
‘बरु खाना र पानी केही पनि नदे, तर म यो धन्दा कुनै हालतमा गर्दिन’, मैले पनि कड्किएरै भनेँ ।
अब म बन्दी भएकी थिएँ । कोठाभित्र ढोका ढक्ढक्याउने, कराउने र रुने गर्थेँ । कराउँदा घाँटी नै सुक्यो । रुँदारुँदा आँखा सुन्निए । भित्तामा टाउको ठटाउँदा टुटुल्का उठे तर मेरो वेदना सुन्ने त्यहाँ कोही थिएनन् । छोरालाई कता लगे ? के खान दिए ? मलाई थाहै भएन । बेलाबेलामा झल्याकझुलुक देखाउँथे । फेरि बिजुलीजस्तै चम्काएर कता लैजान्थे, कता ? मेरो भोक, तिर्खा र निन्द्राको कुनै ठेगाना थिएन । पानी खान नपाएर मुख सुक्नु भनेको त हावा बदलेको जस्तो भयो । कसरी सुत्नु ? निन्द्रा लागेको भए पो सुत्नु ! आनन्दमा पो हुँदो रहेछ आरामविराम !
मैले करिब एक महिनासम्म संघर्ष गरेँ । काखको बच्चाको निर्दोष अनुहारले बेला बेलामा मलाई निकै भावुक बनाउँथ्यो । बच्चाको अनुहारमा प्रकट हुन थालेका मुस्कान, रुवाइ र हाँसोका वाल संवेदना र भावहरुमै म केहीबेर भुल्थेँ, केहीबेरपछि पुनः त्यो कहालीलाग्दो यथार्थ मेरो सामु ‘किङ कोब्रा’ झैं फँणा फैलाएर मलाई डस्न तयार भइरहेको पाउँथँे । अनि आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खस्थे । तैपनि मैले आफूभित्रको ‘स्व’लाई कमजोर हुन दिइनँ । आफ्नो अस्मिता जोगाउन संघर्ष गरी रहेँ । कसैलाई आफ्नो शरीर छुन समेत दिइनँ ।
मलाई त्यहाँ पहिलेदेखि नै ल्याइएका अन्य केटीहरुसँग भेट्न दिइँदैनथ्यो । कोठामा एक्लै हुन्थेँ । बेलाबेलामा त्यो घरवाली आएर धम्की दिएर जान्थी या उसले राखेका म्यानेजर केटाहरु आउँथे । एक पटक त्यहीँ काम गर्ने एउटा नेपाली केटो आएर मलाई भन्यो, ‘हेर यो ठाउँ नै यस्तै हो, तँैले अब यहाँबाट उम्किएर जाउँला भन्ने आशै नगरे हुन्छ । बरु तेरो लास बाहिर जान्छ, तर तेरो सासचाहिँ यहाँबाट जाँदैन ।’
‘जे होस् होस्, तर म यो काम गर्दिनँ । बरु मेरो लासै बाहिर जाओस्’, मैले पनि अड्डी कसेँ ।
म्यानेजर भनेर त्यहाँँ राखिएको त्यो नेपाली केटोले केही बेरमै लामो नेपाली खुकुरी ल्यायो । खुकुरीको धार मेरो घाँटीमा राख्दै उसले भन्यो, ‘हेर तैँले कि यो धन्दा गर, हैन भने तँलाई हामी काट्छौं । तेरो टाउको र शरीर काटेर बाहिर सडकमा फाल्छौं । मानिसहरुले तेरो मृत शरीर हेर्नेछन्, थुक्नेछन्, तर यो लास कसको हो ? भनेर कसैले पनि सोध्ने छैनन् बुझिस् ।’
मैले यसो सोचेँ । दिमागमा धेरै कुरा खेले । आ ! भोलि एक दिन मर्नु नै छ भने यौन धन्दा गर्नुभन्दा त मर्नु नै ठिक भन्ने लाग्यो ।
आँखा चिम्म गरेर भनेँ, ‘ल काट् ।’
मेरो साहस देखेर त्यो म्यानेजर छक्क प¥यो । उसले खुकुरी घाँटीमै लगिसकेको थियो, तर मलाई काट्न भने सकेन । बरु उसले मलाई निर्घातसँग कुट्यो । कुन हदसम्म कुटयो भने मैले त्यस्तो कुटाइ जिन्दगीमा पहिलो पटक खाएकी थिएँ । त्यो केटो र घरवालीसमेत मिलेर मेरो शरीरका विभिन्न अङ्गहरुमा बलिरहेको चुरोटको ठुटोले घोचिदिए । कपाल भुत्ल्याए । गालामा मुड्की र झापड मारे । कान निमोठिदिए । कञ्चटका रौं तानिदिए । अनि लात्तै लात्ताले गोदे । दिनुसम्मको यातना दिए ।
म पनि के कम थिएँ र ? जतिसुकै कुट्दा पनि उनीहरुले मलाई एक महिनासम्म ‘धन्दा’मा लगाउनै सकेनन् ।
कोठीमा राखिएका केटीहरुबीच पनि विभेद थियो । धन्दा गर्ने र पैसा कमाइदिने केटीहरु मीठो–मीठो खान पाउँथे । हामी भर्खर गएका र धन्दा गर्न नमान्नेलाई चाहिँ ज्यान धान्नका लागि मात्र कमसल खाना दिइन्थ्यो । मासुको झोल या सागको झोल र भात मात्र दिइन्थ्यो । एक महिनासम्म म पानीकै भरमा बाँचे हुँला । बडा त्रासदिपूर्ण दिनहरु थिए ती ।
मलाई लगिएको एक महिना जस्तो पछि हो, पिसाबले च्यापेर म ट्वाइलेट छिरेकी थिएँ । ट्वाइलेटबाट बाहिर निस्कँदा एउटा चिरपरिचित अनुहारसँग मेरो जम्काभेट भयो । त्यो त्यही दलाल केटा थियो, जसले मलाई बम्बईमा ल्याएर बेचेको थियो । मलाई बेच्ने दुईजनामध्ये एउटासँग ट्वाइलेटमा भेट भएको थियो भने अर्को अलि पर उभिइरहेको थियो । उनीहरुलाई देख्नासाथ मैले आँखा देखिनँ । कति रिस उठेछ मलाई आपूm नजिकै रहेको दलाललाई फनन घुम्ने गरी एक झापड लगाइदिएँ । त्यो केटाको पछाडि घरवाली उभिइरहेकी रहिछ । मैले त्यो दलाललाई कुटेको देखेपछि घरवालीले मलाई झम्टिई र एक झापड लगाई अनि लगेर रुममा थुनिदिई ।
मैले झयालबाट देखेँ, एउटा अर्को कहालीलाग्दो दृश्य । मलाई बेच्ने ती दलालहरुले मेरै आँखा अगाडि भर्खर नौ वर्षकी कलिली बालिकालाई बेचिदिए ।
मेरो झापड खानबाट बचेको अर्को दलाल आएर मलाई भन्दै थियो, ‘अहिलेसम्म तिमीले धन्दा गरेकी रहिनछ्यौ । यदि यस्तो काम गर्दै नगर्ने तिम्रो सोच हो भने हिँड मसँग, म तिमीलाई नेपाल लैजान्छु ।’
मैले विस्फारित नेत्रले त्यो दलाललाई हेरेँ । अनि उसको मुखभरि थुकिदिएँ ।
‘तैँले के सोचेर मसँग यस्तो कुरा गर्दैछस् मुर्दा ? फेरि अर्को ठाउँमा लगेर बेच्ने तेरो दाउ हैन ?’, मैले कड्किँदै भनेँ ।
‘हैन, त्यस्तो हैन, म अर्को केटाको लहलहैमा लागेर त्यस्तो काम गरेको हुँ । तिमीले अहिलेसम्म धन्दा नगरेको थाहा पाएँ, त्यसैले जान्छौ भने लैजान्छु भनेको हुँ’, मुर्दाले सहानुभूति जनाउँदै भन्यो ।
‘बढी बोल्छस् साला कुकुर, जा पहिला तेरी आमा, तेरी दिदी, तेरी बहिनी कोको छन्, सबलाई यहाँ ल्याएर बेच, अनि मात्र म तँसँग जान्छु’, मैले भनेँ ।
मैले उसलाई धेरैबेर गाली गरिरहेँ । मैले हेर्दाहेर्र्दै उनीहरु कलिली बालिका बेचेबापतको नोटको बिटो बोकेर चुरोटको मुस्लो छाड्दै त्यहाँबाट ‘रफुचक्कर’ भए ।
तल पान पसलमा भने हाम्रै नेपाली दाजु उदितनारायण झाको स्वरमा एउटा गीत घन्किरहेको थियो–
‘मेहन्दी लगा के रखना
आएगें तेरे सजना’
(केही दिनअघि सार्वजनिक भएको दनुवारको कृति ‘आँसुको शक्ति’ भित्रका एक अंश)